एक लाख पर्ने खुकुरी !
बागलुङ, बडिगाड गाउँपालिकामा आयोजित प्रथम बडिगाड महोत्सव तथा पौँदी न्वागी मेलामा बिक्रीका लागि राखिएको खुकुरी । स्थानीय कालिगढद्वारा निर्मित खुकुरीको मुल्य रु. ९९,९९९ राखिएको छ । तस्वीर : रामबहादुर थापा, बागलुङ रासस,
सयभन्दा बढीबाट घटेर २० विद्यार्थीहरु !
जाजरकोट, डोल्पा ठुलिभेरी नगरपालिका –कुम्लीस्थित मन्मा आधारभूत विद्यालयमा एक सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु घटेर २० जना अध्ययन गर्दछन । डोल्पाका अधिकांश शिक्षण सँस्थामा विद्यार्थीहरु घट्नेक्रम जारी छ । तस्वीर हेमन्त
हावाबाट निकालियो विजुली !
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका– ४ मित्याल पाल्पामा हावाबाट सञ्चालित बिजुली सेवा । बाह्रै महिना निरन्तर हावा चलिरहने मित्यालमा १२ सय वाट विद्युत् उत्पादन गरेर वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय तथा